စစ်တမ်းရလဒ်များ - Netbook များအတွက်အကောင်းဆုံးအရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ | Linux မှ
စစ်တမ်းရလဒ်: Netbook များအတွက်အကောင်းဆုံး distro ကဘာလဲ
နောက်ဆုံးပေါ်စစ်တမ်း၏ "netbook များအတွက်အကောင်းဆုံး distro သည် ... " ၏စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသောရလဒ်များဖြစ်သည်။ လူတွေဘယ်လိုထင်လဲဆိုတာသိချင်သလား။ သင်ငါ့ကိုမေးရင် Ubuntu နဲ့သူဆင်းသက်လာတာတွေတော်တော်ကောင်းသွားပြီလို့ထင်တယ်။ ဆိုလိုတာက Canonical ဟာမိုဘိုင်းပစ္စည်းတွေဆီကိုပိုပြီးရွေ့လျားခြင်းဖြင့်သူတို့ရဲ့အလုပ်ကိုကောင်းကောင်းလုပ်နေတယ်။
အခြား - ၇၉ မဲ (၃၀.၃၈%)
Lubuntu - ၄၈ မဲ (၁၈.၄၆%)
Xubuntu - ၄၈ မဲ (၁၈.၄၆%)
Jolicloud: ၃၀ မဲ (၁၁.၅၄%)
Puppy Linux: ၂၆ မဲ (၁၀%)
Elive: ၁၃ မဲ (၅%)
Easypeasy - ၆ မဲ (၂.၃၁%)
Zenwalk: ၃ မဲ (၁.၁၅%)
Slitaz: ၃ မဲ (၁.၁၅%)
xPUD - ၃ မဲ (၁.၁၅%)
ဒေလီ Linux - ၁ မဲ (၀.၃၈%)
ငါ Otra ရရှိခဲ့သည့်အာရုံစူးစိုက်မှုအားဖြင့်ငါအလွန်ထိမိခဲ့သည်။ အကယ်၍ သင်သည်ထိုရွေးချယ်မှုအတွက်သင်မဲပေးခဲ့ပါက၊ သို့မဟုတ်သင်မဲပေးခဲ့ပါကသင်ကမဲပေးမည်ဆိုပါကသင်ဘာစဉ်းစားနေသည်ကိုစဉ်းစားနေသည်ကိုသိလိုပါသည်။ သင့်မှတ်ချက်ပေးပါ 🙂
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » FileLet ရဲ့ UseLinux » စစ်တမ်းရလဒ်: Netbook များအတွက်အကောင်းဆုံး distro ကဘာလဲ
စုစုပေါင်းကျွန်ုပ်၏ Asus eeepc 1005pe တွင် arch ကိုကြာမြင့်စွာအသုံးပြုခဲ့ပြီးအလွန်လျင်မြန်သည်။ ကျွန်ုပ်တွင်ပြproblemsနာမရှိသေးပါ၊ ကျွန်ုပ်အားအရာရာကိုမည်သို့တပ်ဆင်ရန်နှင့်ပြုပြင်ပြောင်းလဲရမည်ကိုလေ့လာရန်ကျွန်ုပ်ကိုအချိန်အနည်းငယ်ယူခဲ့ရသည်၊ သို့သော်အမှန်တကယ်တန်ဖိုးရှိသည်။ အကြံပြုပါသည်
စိတ်ဝင်စားစရာအကောင်းဆုံးကတော့ "Other" :-)၊ ဘယ်ဟာလဲ။ ဘယ်သူသိတယ် ... xD
လုံးဝ Ale! Netbook တွေမှာအသုံးပြုဖို့ရည်ရွယ်ထားတဲ့ distros တွေအားလုံးပါ ၀ င်တာကြောင့်ကျွန်တော်အာရုံစိုက်မိသည်။ အခြားမဲပေးသူအများစုသည် Ubuntu ကိုစဉ်းစားနေကြသည်ဟုကျွန်ုပ်ခန့်မှန်းသည် ဒါကြောင့် Ubuntu နဲ့သူရဲ့လုပ်ပိုင်ခွင့်တွေဟာမဲရဲ့ ၅၀ ရာခိုင်နှုန်းနီးပါးယူလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ပြောတာပါ။
-Free Software ကို = အခမဲ့ဆော့ဗ်ဝဲဖြစ်ပါတယ်
- အခမဲ့ဆော့ (ဖ်) ဝဲသည် = ခိုးကူးမှုဖြစ်သည်။
- အခမဲ့ဆော့ (ဖ်) ဝဲကိုအသုံးပြုပါကစိတ်ချရသောနည်းပညာအထောက်အပံ့ကိုသင်တွေ့ရှိလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ
- အကယ်၍ အခမဲ့ဆော့ (ဖ်) ဝဲသည်ကုဒ်ကိုခွင့်ပြုပါက၎င်းသည်မလုံခြုံပါ။
အကယ်၍ ဆော့ (ဖ်) ဝဲ (အခမဲ့ (သို့) မရ) သည်အခမဲ့ဖြစ်လျှင်၎င်းသည်အလွန်ကောင်းမဖြစ်သင့်ပါ။ ကျွန်ုပ်က၎င်းကိုပေးခဲ့လျှင်၎င်းသည်ပိုကောင်းရမည်။
ဤနှင့်အခြားမှားယွင်းသောမှားယွင်းမှုများမှာယနေ့ခေတ်တွင်သာမန်အသုံးပြုသူများ၊ အချို့သောအလုပ်ရှင်များ (စနစ်များတွင်ဘွဲ့ရရှိသော်လည်း) နှင့်အဖွဲ့အစည်းများရှိနေဆဲဖြစ်သည်
အခြား: Debian Wheezy 😛
Juan Manuel Barra Valdebenito ဖြစ်သည် ဟုသူကပြောသည်
အခြားတစ်ခုကတော့ ubuntu netbook သို့မဟုတ် unity နှင့် kde netbook တို့ဖြစ်သည်
Juan Manuel Barra Valdebenito အားပြန်ကြားချက်
အခြား = တစ် ဦး ARCH LINUX ဖြစ်ပါတယ်
ကောင်းပြီငါ XFCE ^^ နှင့်အတူငါချစ်ရာသခင်၏ Debian ကိုရည်ညွှန်းပြီးမဲပေးခဲ့ကြသည်
ကျွန်ုပ်၏ netbook တွင် Ubuntu 10.10 ကို Gnome2ဖြင့်အသုံးပြုသည်။ ၎င်းတွင် Fnora 14 ကို Gnome နှင့် Lubuntu နှင့်လည်းစမ်းသပ်ခဲ့သည်။ ၃ ယောက်စလုံးဟာစက်ရုံမှလာတဲ့နှေးကွေးသော Windows3Started ထက်ပိုကောင်းပါတယ်။ ဒါပေမယ့် Ubuntu ကိုကျွန်တော်ရွေးချယ်ခဲ့တယ်။
ယခုအချိန်တွင်ကျွန်ုပ်သည် OS ကိုပြောင်းလဲမည်မဟုတ်သော်လည်း၎င်းသည် Unity (သို့) Gnome3ကိုမတော်တဆတိုက်မိမည်မဟုတ်ပါ။ ကျွန်ုပ်၏ PC တွင်နှစ်မျိုးလုံးကြိုးစားပြီးဖြစ်သည်။
နက်ဘွတ်ခ်တွင် Gnome2ကိုအသုံးပြုခြင်းသည်ကောင်းမွန်သောအတွေ့အကြုံဖြစ်နိုင်သည်ဟုလူအများစုအတွက်ကျွန်ုပ်၏အတွေ့အကြုံကိုကိုယ်ရေးကိုယ်တာကိစ္စအဖြစ်မှတ်ချက်ပေးသည်။
ငါ၏အ netbook (Asus eee-pc 701) တွင် Ubuntu Netbook Remix ကိုအသုံးပြုသည်။ အရင်တုန်းက Ubuntu Desktop နဲ့ UNR တို့ရဲ့တခြား version တွေကိုသုံးဖူးတယ်။ ငါက 10.04 LTS ၏ UNR ဖြစ်ပါတယ်ထင်ပါတယ်။
နောက်ထပ်တစ်ခုမှာ windows Vista ha ဖြစ်သည်။ ၎င်းကိုဖွင့်ရန် ၃ နာရီခန့်ကြာနိုင်သည်
အခြားတစ်ခုတွင်ကွဲပြားသော distros များပါ ၀ င်ရမည်။ ထို့ကြောင့် "ငါနောက်ထပ်အနိုင်ရ" ဟုပြောခြင်းသည်အတော်အတန်စိတ် ၀ င်စားစရာဖြစ်သည်။
ဒီနေရာမှာကံမကောင်းတာကဒီမှာမက္ကဆီကိုမှာအခမဲ့ဆော့ဗ်ဝဲလုံးဝမဖြန့်ခဲ့ဘူး။ မိုက်ခရိုဆော့ဖ်၏လက်ဝါးကြီးအုပ်မှုကြားတွင်ဖြန့်ချိမှုမရှိခြင်း (သို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်ပြောနိုင်သည်မှာကျွန်ုပ်သိသောတစ်ခုတည်းသောဖြန့်ဖြူးခြင်းဖြစ်ရပ်သည်လက်တင်အမေရိကအခမဲ့ဆော့ဗ်ဝဲတပ်ဆင်ခြင်းပွဲတော်ဖြစ်သည်) နှင့်စီးပွားဖြစ်ဆော့ဗ်ဝဲ၏ပျံ့နှံ့နေသောခိုးကူးမှု။ ငါမကြာမီပြောင်းလဲလိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ပါတယ်, ဒါပေမယ့်အမှန်တရားတော်တော်လေးဝေးကြည့်ရှုသည်။
အဲ့တာမှန်တယ်! ကျေးဇူးတင်ပါတယ် Edu x မှတ်ချက်ပေးပါ။
ကျွန်တော့်နိုင်ငံ (စပိန်) မှာခိုးကူးမှုတွေအများကြီးရှိနေပြီးလူအများစုက gnu / linux ကိုမသုံးကြဘူး။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့ဟာ OS ကိုပြောင်းလဲဖို့နှောင့်နှေးတာမဟုတ်တဲ့အပြင်အသစ်သင်စရာတွေလည်းရှိနေတယ်။
netunts တွေမှာအမှန်တရားကိုကျွန်တော်ကြိုက်တယ် Lubuntu ... LXDE ဟာကောင်းတဲ့ desktop ဖြစ်သည်။ ဒါပေမယ့် netbook တွေပေါ်မှာ Unity ကနေရာလွတ်နည်းသွားလို့ကျတော့ပိုပြီးကျိုးကြောင်းဆီလျော်ပုံရတယ်။ အကယ်၍ ငါမှန်ကန်စွာမှတ်မိမယ်ဆိုရင် lubuntu မှာ netbook များအတွက်ပြုလုပ်သော session တစ်ခုရှိသည်မဟုတ်လား။
ငါသဘောတူသည်အခြား ARCH LINUX ဖြစ်သည်
Javier Debian Bb Ar ဟုသူကပြောသည်
Javier Debian Bb Ar အားပြန်ပြောပါ
Arch Linux သည် netbook များပေါ်တွင်ကောင်းစွာအလုပ်လုပ်သည်
ဒီတစ်ခုအတွက်အနာဂတ်ကိုကျွန်တော်တကယ်မြင်တွေ့ခဲ့ပြီ၊ ယခုအနည်းငယ်အစိမ်းရောင်ဖြစ်နေသည် (ပြုပြင်ရန်လိုအပ်သောအချက်နှစ်ချက်)၊ သို့သော်ပူစီနံများသည်လေးနက်ပြီးတာဝန်ရှိသည်ဟုထင်ရသော်လည်း၎င်းကိုသင် debian နှင့်ပေါင်းစပ်လိုက်လျှင် ... mmm, splussive 😀
netbook နှင့် desktop တို့အတွက်ဖြစ်သည်။
PS: Debian တွေကမလေးပါဘူး၊ ဒါပေမယ့် mint ကဘာကိုမဆိုနီးနီးကပ်ကပ်ထိကိုင်စရာမလိုဘဲနက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းအချိန်တော်တော်များများကုန်လွန်စေတယ်။ ဤကဲ့သို့သောအချို့သုံးစွဲသူများကမူမလုပ်နိုင်ပါ။ ရွေးချယ်စရာ ၂ ခုရှိသည်မှာကောင်းပါသည်
မားကို့စ်ကိုကျွန်တော်သဘောတူတယ် ၎င်းတွင်ကြီးမားသောအနာဂတ်ရှိသော်လည်းအစိမ်းရောင်နည်းနေသေးသည်။ ငါခဏသုံးပြီးလုပ်နေတာကြောင့်ပြproblemsနာတချို့ဖြစ်သွားတယ်။ ထူးဆန်းတာကဒီဟာကပိုပြီးတည်ငြိမ်လိမ့်မယ်လို့ထင်ခဲ့တယ်၊ ဒါပေမယ့်ဟေး။
Jorge Moreno Abuslaiman ဟုသူကပြောသည်
Debian သည်ပြီးပြည့်စုံစွာအလုပ်လုပ်သည်🙂ပြီးခဲ့သည့်စစ်တမ်းတွင်အဓိကပြissueနာမှာအသုံးပြုသူကိုသင်ယူလိုစိတ်မရှိခြင်းဖြစ်သည်။ လူအများက၎င်းသည်ခက်ခဲသည်သို့မဟုတ်ရှုပ်ထွေးသည်ဟုထင်မြင်ကြပြီး၊ ပထမပြproblemနာသို့မဟုတ်အဆင်မပြေမှုများကြောင့်ဤအံ့ဖွယ်ကမ္ဘာကြီးကိုစွန့်ခွာသွားလေ့ရှိသည်။ gnu / linux ။ ကျွန်ုပ်သည်အခမဲ့ဆော့ဝဲလ်ဘာသာရပ်နှင့်အတူတစ်နှစ်နီးပါးရှိခဲ့ပြီးပျော်ရွှင်မှုထက်ပိုပြီးကျွန်ုပ်၌အခက်အခဲများရှိခဲ့သည်၊ သို့သော်ကျွန်ုပ်သည်အမြဲတမ်းလေ့လာရန်ဆန္ဒရှိသည်။ ကျွန်ုပ်၌တည်ငြိမ်သော debian တစ်ခုရှိသည်။ ကျွန်ုပ်၏အမြင်များ🙂
Jorge Moreno Abuslaiman အားပြန်ပြောပါ
Juice Glass ကိုတုန့်ပြန်ပါ
လူမှုရေးကွန်ရက်များ၊ စကားပြောခန်းများ၊ စာတိုများနှင့်စကားလုံးများကိုသုံးစွဲရန်သာမန်လူများသည်ကွန်ပျူတာများကိုသာအသုံးပြုသည်ဟုကျွန်ုပ်ယုံကြည်သည် ဒါပေမယ့်သူတို့ကကွန်ပျူတာကိုတကယ်စိတ်မ ၀ င်စားဘူး။ ဒါကြောင့်သူတို့ဟာဘာတွေလဲဆိုတာမသိသေးတဲ့အတွက်တခြား operating system options တွေကိုမစုံစမ်းကြဘူး။
အလွန်စစ်မှန်တဲ့ Mario! အဲဒါကိုပြောင်းလဲဖို့နည်းလမ်းရှိပါသလား။ ဆိုလိုတာက၊ အခမဲ့ဆော့ဗ်ဝဲရဲ့အတွေးအခေါ်ကိုရှင်းပြနိုင်ဖို့နဲ့ဗဟုသုတတိုးပွားလာဖို့ဆိုရင်လူတွေကကွန်ပျူတာကိုကိရိယာတခုအနေနဲ့မစဉ်းစားရဘူး။
အက်ဝါဒို Battaglia ဟုသူကပြောသည်
သူတို့၏ကွန်ပြူတာများပေါ်တွင်အခမဲ့ဆော့ဖ်ဝဲလ်များအသုံးပြုခြင်းကိုဖြန့်ဖြူးရာတွင်နိုင်ငံတော်၏အခန်းကဏ္ important သည်အရေးကြီးသည်ထက်ပိုမိုသည်ဟုငါယုံကြည်သည်။ သို့သော်မိုက်ခရိုဆော့သည်ရေဘဝဲနှင့်တူပြီးလူတိုင်းနှင့်သဘောတူညီချက်လက်မှတ်ရေးထိုးသည်။
လူများသည် Linux ကိုမသိရှိဘဲယခင်ကကဲ့သို့မဟုတ်ပါ။ ယခုသူတို့သိကြသော်လည်းသူတို့၏ "အဆင်ပြေသော" Windows မှပြုပြင်ပြောင်းလဲလိုကြသည် (haha! နာရီဝက်လောက်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုပြုလုပ်နေစဉ်တွင်) ။ နောက်တစ်ခုမှာ "အမှတ်တံဆိပ်" ဆော့ (ဖ်) ဝဲ (လ်) တမျိုးတည်းဆော့ဖ်ဝဲလ်မရှိခြင်းဖြစ်သော်လည်းဖြစ်ပျက်မှု နည်း၍ ဖြစ်သော်လည်းတစ်ခုတည်းသောခိုင်လုံသောအကြောင်းပြချက်မှာ Photoshop မရှိခြင်းပင်ဖြစ်သည်။
ငါ "ဝင်းဒိုးအခမဲ့" ဆိုပါက (၎င်းသည် pc သို့ ဝင်၍ ဖြစ်စေ hack သောကြောင့်) ဟူသောစကားစုကိုအလွန်အကျွံရှာဖွေတွေ့ရှိသည်။ ဤနေရာတွင်အာဂျင်တီးနားတွင်ဆော့ (ဖ်) ဝဲအတွက်ငွေပေးချေရန်ဓလေ့ထုံးတမ်းမဟုတ်သောကြောင့်တစ်ခုမှတစ်ခုသို့စီးရီးနှင့်အက်ကြောင်းများကိုသယ်ဆောင်ရန်သဘာဝကျပါသည်။ အခြားသူများ။
ဂိမ်းတွေမှာတော့ရှင်းနေပါတယ်။ အထူးသဖြင့် Wine ထက်ဂိမ်းနဲ့ဖြစ်နိုင်ချေအတော်များများအတွက် Linux ကိုကျွန်တော်မထောက်ခံပါဘူး။
Eduardo Battaglia အားပြန်ပြောပါ
အဲလက်စ်၏အဆိုအရ Linux ပြန့်ပွားမှုကြုံတွေ့ရသည့်ကြီးမားသောပြcomputerနာမှာကွန်ပြူတာခိုးကူးမှုဖြစ်သည်၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် M $ ​​၏ပရိုဂရမ်များနှင့်လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုစနစ်များ၏ trout ကော်ပီများကိုရယူရန်အလွန်လွယ်ကူသည်။ အခြားတစ်ဖက်မှကြည့်လျှင်လူအများတို့သည်ယုံကြည်မှုကင်းမဲ့မှုကြောင့်ငွေပေးချေခြင်းမရှိသောကြောင့်ယုံကြည်မှုကင်းမဲ့ကြသည် (gugug10101) က ... မပြောရသေးပါ။
နောက်ပြproblemနာတစ်ခုကတော့ကွန်ပျူတာပညာရှင်အားလုံးနီးပါး (ငါသိသူများ) မှာ Linux တစ်ခုမှတစ်ခုသာသိတယ်။
ငါကြိုးစားခဲ့ပေမယ့်မဖြစ်နိုင်ဘူး။ ဒါပေမယ့်အိမ်မှာစမ်းသပ်မှုတစ်ခုလုပ်ခဲ့တယ်။ ငါမသုံးတော့ဘူး (ဒီရိုးရှင်းတဲ့) နဲ့ Ubuntu7ကနေထွက်ခွာတဲ့အခါမှာ W10.10 ကို uninstall လုပ်လိုက်တယ်။ အစပိုင်းမှာဆန္ဒပြမှုတွေနဲ့ပြန်လည်စတင်ဖို့ကြိုးစားမှုတွေရှိခဲ့တယ်။ (စိတ်ရှည်ရှည်နဲ့အချိန်ပို) M $ SO အကြောင်းလူတိုင်းကိုမေ့သွားအောင်လုပ်နိုင်ခဲ့တယ်။
Samsung GALAXY S II ဖုန်း
Debian တွင် Dropbox ကိုထည့်သွင်းသောပြနာများ